May 12, 2020 2151
समय राम्रो रहे’कोले धर्म ‘कर्ममा समय दिन स’किने हुनाले मन शान्त रहनेछ । पुरानो रोग निको भएर जाने तथा पुराना समस्या हल भएर जानेछ । औषधीजन्य तथा खा’द्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामा’नको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । खोज तथा अ’नुशन्धानमा सकारात्मक नतिजा हात लगाउँन सकिने हुनाले शरिरका थप उर्जा पैदा हुनेछ ।
प्रणय सम्वन्धमा आत्मियता’को विकास हुनेछ भने’ घर परिवारमा सबैसँग सौहार्दपुर्ण सम्वन्ध स्था’पना गर्न सकिनेछ । तरपनि समय प्रतिकुल हुनाले काम वा अध्ययनको शिलशि’लामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरस”फाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
मंगलबार बिहान सम्मको समय मध्ययम रहेकोले दिदि बहिनीबाट सहयोगको आ’श्वासन मात्र प्राप्त हुनेछ । भौतिक सम्पती तथा रुपैया पैसा हराउँन तथा लुटिन सक्छ ध्यान’ दिनुहोला । स्वास्थ्यमा’ समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । बिद्यामा सफलता पाउन मिहिनेत गर्नुपर्ला । आर्थिक अपचलनको मुद्धा मामिला आई लाग्न सक्छ काम गर्दा ध्यान दिनु जरुरि देखिन्छ ।
मंगलबार दिउसोबाट समय राम्रो रहेकोले धर्म,सस्कृति तथा आफ्नो रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने काममा समय खर्चनु पर्नेछ । पढा’इ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा’ आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सामाजिक काम गरी पुरस्कृत हुने योग रहेकोछ । साथि’भाई तथा आफन्तहरुको सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । समयले साथ दिने हुनाले मन प्रशन्न रहने तथा भाग्य बृद्धि हुनेछ ।
साताको सुरु र अन्तको ‘समय राम्रो रहेकोले आफ्नो सस्कार तथा रितिरिवाजमा जोगाउन समय लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन क’सिलो भएर जानेछ भने दाम्पत्य ‘जीवन खुसी रहनेछ । आफूले पाएको अधिकारलाई भरपुर प्रयोग गरी उपलव्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । घरमै बसेर ध्यान तथा साधना गर्दा शरिर स्वास्थ्य हुनेछ । घर परिवारमा आत्मियताको भाव बढ्नेछ भने मित्रताको वन्धन कसिलो भएर जानेछ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग गरि आफ्ना लेख रचनाहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । मंगलबार दिउसोबाट बि’हीबार साझ’सम्मको समय मध्ययम रहेकोले साना’तिना काममा समय व्यातित हुदा महत्वपुर्ण कामहरु थाति रहनेछन् । विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा सामेल नहुनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ । काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला ‘काम बिग्रने तथा आलोचना गर्नेहरु प्रशस्त भेटिनेछ ।
कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने आफन्तको सहयोगले कामहरु समयमा नै सका’उँन सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा रमा’उँन चाहनेहरुलाई समयले साथ दिनेछ भने जीवन साथीसँग थप आत्मियता बढ्नेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । अध्ययनमा मन जाने हुना’ले नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
समाजमा बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै थेरै कामहरु गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा माव’लीपक्षबाट सहयोग पाईनेछ । साताको अन्त अर्थात शुक्रबार र शनिबारको समय मध्ययम रहेकोले खानपा’न तथा मौषमको ख्याल गर्नुहोला छाति तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धि समस्या आउनसक्छ । अरुकै लहैलहैमा लागेर आफ्नो सस्कार भुल्दा पछि गएर पछुतो हुने ग्रहयोग रहेकोछ । भौतिक सम्पती त”था सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
साताको अधिकांस समय राम्रो रहेकोले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी वा बैचारिक कुराले सबैलाई आफ्नो मातहतमा राख्न सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने स’मय रहेकोछ भने जीवन साथि’को सहयो’ग हर क्षेत्रमा रहने योग रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपार्र्ईँँले गरे’को काम समयमा सम्पन्न हुने हुदा चर्चा चुलिनेछ ।
विलासी वस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाइने तथा सा’नु प्रयत्नले भौतिक बस्तुहरु लाभ हुनेछन् । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्री’मा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । काम वा अध्य’यनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । वा’हिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
मंगलबार बिहानसम्मको समय मध्ययम रहेकोले राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुनेछैन । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मन’मुटाब बढ्नेछ । सामान्य स्वा’स्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । मंगलबार दिउसोबाट समय उत्तम रहेकोले पढाइ लेखा’इमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउँदै नतिजा आफूतिर ल्याउँन सकिनेछ ।
माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवार तथा आफन्त बिचको सम्व’न्धमा सुधार भएर जानेछ । राज’नीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । तरपनि काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भू’मिमा हुनुहुन्छ भने सर’सफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । पैत्रिक धन सम्पतीको प्रयोग मार्फत कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले माया प्रेम’मा नजिक हुने समय रहेकोछ भने दाम्पत्य जीवन सु’खि रहनेछ । कला तथा साहित्य क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगती हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग गरि आफ्ना भनाईहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोग ‘तथा समर्थन पाईन ग्रह’योग रहेकोछ । दाजुभाईहरु सँगको सम्बन्धमा नयाँ पनको बिकास हुनेछ ।
पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहशिलो काम गर्ने आट आउनेछ । मंगलबार मध्यान्हबाट बिहीबार साझस’म्मको समय मध्ययम रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । यात्रा स्थगित गर्नु नै राम्रो हुनेछ । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । नीति संगत काम नगर्दा जरिवाना ‘तिर्नु पर्ने हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा रमाउँन चाहने’हरुलाई समयले साथ दिनेछ भने जीवन साथीसँग थप आत्मियता बढ्नेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामा’नको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामान’को व्यापा’रमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । समाजमा बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै थेरै कामहरु गर्न सकिनेछ ।
कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने आफन्तको सहयोगले कामहरु समयमा नै सका’उँन सकिनेछ । आफन्तजन तथा दाजुभाईबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेममा सामिप्य’ता बडेर जानेछ भने परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ । शुक्रबार र शनिबारको समय मध्ययम रहेकोले ग’लत काम भुलेर पनि नगर्नुहोला नराम्रो परिणाम भोग्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य बिग्रने हुँदा काम’हरु प्रभावित हुनेछ सचेत रहनुहोला । आफन्तसँग मनमुटाव बढ्नेछ ।
साताको अधिकांस समय राम्रो रहेकोले शुभ समा’चारले मनमा थप उत्साह जगाउँनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुले भरपुर रमाईलो गर्न सक्नेछन् । सा’माजिक काम गरी नाम तथा दाम कमा’उन सकिनेछ भने समाजमा सम्मानित हुने योग रहेकोछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
तपार्ईँको काममा आफन्त तथा शुभचि’न्तक हरुको सहयोग रहनेछ । धर्मप्रति वि’स्वास बढ्ने तथा साधना तथा ध्यानमा मन जानेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापा’रमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फ’त आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
मंगलबार बिहानसम्मको समय मध्ययम रहेकोले काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफा’ईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । आ’त्मिय मित्र तथा सहयोगिको सहयोग नपाउँदा थालेका कामहरु बिचमा छोड्नु पर्ने हुनसक्छ । मंगल’बार दिउसोबाट दमदार बोलिको प्रभावले नसोचेको कामहरु हुने तथा सबैले तपार्ईँको तारिफ गर्नेछन् ।
पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने हुदा आफन्त तथा गुरुजनहरु खुसी हुनेछन् । प्रेममा आत्मियता बढ्नेछ भने कुटुम्ब तथा आफन्तबाट सहयोग पाइने योग रहे’कोछ । साथिभाई तथा आफन्त सँग सँगै रहेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । औषधी’जन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । तरप’नि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले आफूसँग भएका स्रोत साधनहरुलाई सही रुपमा परिचालन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखा’इमा मन जाने हुनाले राम्रो अंक ल्याई ‘सफलता हात पार्न सकिनेछ । कुनै पनि विषयमा समयमा नि’र्णय लिन सक्दा मानसम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । प्रेममा आत्मियताको भाव झल्कनेछ भने सा’थीभाई हरुसँगै रहेर मिठो खाना खाने तथा रमाईले गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
मंगलबार दिउसोबाट बिहीबार साझसम्मको समय मध्ययम रहेकोले काम’गर्दा ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ । सम’यमा कामहरु सम्पन्न नहुँदा मान सम्मानमा आघात पर्न सक्छ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँ आफ्नै कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । काम वा अध्ययनको शिलशि’लामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
बिभिन्न भौतिक वस्तु तथा विलाशी सामा’नको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मनजाने हुनाले अग्र स्थानमा तपार्ईँको नाम आउँनेछ । आफन्तजन तथा दाजुभाईबाट भनेज’स्तो सहयोग पाइने ‘हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बडेर जानेछ भने परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ ।
प्रेम तथा मित्रताको वन्धन कसिलो हुने’छ भने दाम्पत्य जीवन सुखि रहनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापा’रमा मन्दि आउँने तथा घाटा’ लाग्नेछ । शुक्रबार र शनिबारको सम’य मध्ययम रहेकोले समस्याका खाडलहरु पुर्न अथक प्रयास गर्दा गर्दै विफल हुनुपर्दा तनाव बढ्नेछ । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला । वाहिरी वातावरण तथा सरसफा’ईमा ध्यान दिनुहोला ।
Prevसिमा बिʼबाद चर्किरहेकाे बेला डा. महाबिर पुनकाे दमदार आईʼडिया – जसले हुनसक्छ भारतकाे सपना चकनाचुर !।।तपाई लाई कस्तो लाग्छ कमेʼन्ट गर्नुहोस
Nextआज डलरको भाउ बढ्यो , अन्य मुलुकको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो
प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा सांसदले गरे तोडफोड…. (भिडियो हेर्नुहोस)
भारत’मा पनि तिब्र रुपमा फैलि’न थाल्यो कोरो’ना भा’इरस, हेर्नु’स २ दिन भित्रै यति धेरैमा सं’क्रमण